Maqaallada ku saabsan Mexico
11 Magaalooyinka Xisbiga ee Meksiko
October 21, 2020 Antika Kumari Mexico, wax in la sameeyo
Haddii aad raadineysid fasax xeebeed iyo meel aad ku xafladeyso marka loo eego Mexico waa meesha ugu fiican ee loo socdo. Halkan waxaa ku yaal liiska kow iyo toban ka mid ah magaalooyinka xafladaha ugu wanaagsan Mexico. Ka soo qaado xulashada magaalooyinkan, kula xafladee dadka deegaanka iyo kuwa kale
10 Makhaayadood oo ku yaal Magaalada Meksiko
June 29, 2020 Antika Kumari Mexico, wax in la sameeyo
Cunnooyinka laga bixiyo Mexico waa kuwo aad u kala duwanaan badan waxayna ku kala duwan yihiin goob ilaa goob. Raadi Makhaayadahaas haddii aad booqanayso Mexico si aad u hesho dhadhan dhab ah oo ah cunnada waddanka. Makhaayadaha ku yaal Mexico waxay isku daraan soo jiidashada iyo u fiirsashada faahfaahin kasta
Sidee shaqo looga helaa Mexico?
Waxaa laga yaabaa 23, 2020 Antika Kumari shaqo, Mexico, safarka, waxyaabo waxtar leh
Mexico waxay noqoneysaa dhaqaale soo baxaya sanadaha soo socda. Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha caanka ah ee Bangiga Adduunka ayaa saadaaliyay mustaqbalka dhaqaalaha Mexico. Waxay bixiyeen bayaanka dhaqaalaha Mexico wuxuu noqonayaa kii shanaad ee ugu weynaa sanadka 2050.
Adeegyada ugu Daryeel Caafimaad ee ugu Fiican ama Isbitaalada Magaalada Mexico
April 30, 2020 Shubham Sharma caafimaadka, Mexico
Intii aan safar ku jirney waxaa jira waxyaabo qaarkood oo aan u baahan nahay inaan tixgelinno. Waxa ugu muhiimsan ee aan u baahan nahay inaan daryeelo waa caafimaadkaaga. Haddii aad xannuunsato markaa waa inaad la socotaa cosbitaalada ugu fiican magaalada
Sida loo dalbado Magangalyo Meksiko
April 30, 2020 Antika Kumari Mexico, qaxootiga
Haddii aad ka baqeyso inaad ku laabato dalkaaga maxaa yeelay naftaada ayaa qatar ku jirta, waxaad codsan kartaa badbaadin qaxooti ahaan. Caqabadaha xagga sharciga ee ka jira nidaamka magangelyada ee Mexico ma beddeli karaan doorka Mareykanka ee ilaalinta. Si kastaba ha noqotee, Mexico ayaa laga yaabaa inay bixiso
April 21, 2020 Antika Kumari Mexico, safarka
Suurtagal ma tahay in miisaaniyad lagu aado Mexico? Baro sida loo qorsheeyo booqashadaada Yucatan Mexico -, tilmaamaha kharashka, waxyaalaha la sameeyo, halkaad joogi lahayd iyo inbadan. Markaa sahaminta waddanka ugufiican! Mexico waa dhul leh microclimates,